Murume wangu haasi kundigutsa pabonde, zvinoita here ndisvirane nemurume wekubasa kana kuti ndogara ndisingaguti? - Masasi eHarare
Ask Tete Molly Murume wangu haasi kundigutsa pabonde, zvinoita here ndisvirane nemurume wekubasa kana kuti...
Murume wangu haasi kundigutsa pabonde, zvinoita here ndisvirane nemurume wekubasa kana kuti ndogara ndisingaguti?
Murume wangu haasi kundigutsa pabonde, zvinoita here ndisvirane nemurume wekubasa kana kuti ndogara ndisingaguti? Murume wangu anoshanda kure, kutaura chokwadi handisi kuguta pabonde. Kubasa kwedu kune murume ane mukadzi wake anogarawo kumusha. Ari kuda kuti ndikabvuma tipote tichisvirana kana murume wangu asipo. Zvinoita here kana kuti ndogara ndisingaguti?
Kuita zvinoita nokuti iwe uri kufunga kuti murume uyu anokwanisa kukugutsa uye murume wako haagutsi. Asi chokwadi ndechokuti kusaguta kwako nemurume wako inyaya yemafungiro ako kana unaye.
Kuguta kwemunhu pakusvirana kunobva pazvinhu zvakawanda asi zvizhinji zvazvo zvinobva pana iye nyakusaguta wacho kwete pane umwe munhu. Kana murume achikwanisa kukumisira mboro uye achikwanisa kukunonokera, zvimwe zvese chiita iwe muridzi.
Chihure hachina zvachinokupa nokuti uchangotora maitiro ako iwayo ugoenda nawo kuchikomba. Paunozoona kuti hausi kuguta unenge watove nedambudziko idzva rokuti wave hure. Unokwanazve kunge wave nechirwere.
Gadzirisa nyaya yemumba menyu pane kubuda mumba uchinohura. Hazvishandi.
Murume wangu haasi kundigutsa pabonde